Mitohy ny hetsiky ny Bianco : any am-ponja ilay nanodinkodim-bola 300 tapitrisa Ar | NewsMada
Mitohy ny hetsiky ny Bianco : any am-ponja ilay nanodinkodim-bola 300 tapitrisa Ar
Miasa mangina. Volabe hatrany amin’ny 300 tapitrisa Ar indray no voahodinkodina teo anivon’ny tetikasa ho an’ny rano madio fisotro AEPA-FAD. Anisan’ny tsy afa-bela amin’izany ilay tompon’andraikitra voalohany teo aloha ary nampidirina vonjimaika any am-ponja.
Nanao fanadihadiana sy famotorana lalina momba ity raharaha fanodinkodinam-bola ity efa an-taony maro, ny teo anivon’ny Bianco. Niafara amin’izao fampidirana am-ponja vonjimaika (MD) ilay tompon’andraikitra voalohany izany, rehefa nandalo ny fitsarana, omaly. Raha ny fanambarana, namatsy vola ny tetikasa ho an’ny fampidirana rano madio fisotro (AEPA-FAD) ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad), niainga amin’ny Tahiry afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Fad). Nahodin’ity tompon’andraikitra teo aloha ity anefa ny 300 tapitrisa Ar tamin’izany vola izany ary izao saron’ny Bianco izao. Ankoatra izany, mitohy hatrany ny asan’ny Bianco amin’ny fanadihadiana sy ny fanamarinana ireo vaovao rehetra, mety ho tafiditra amin’ny fandikan-dalàna. Miainga amin’ireo fitoriana tonga eny amin’izy ireo izany na koa amin’ny alalan’ny fampahafantarana izany amin’ny loharanom-baovao samihafa. Matetika amam-bolana ny antontan –taratasy iray vao vita na mety ho aman-taony aza noho ny fahasarotana eo amin’ny fikarohana ny marina. Aorian’ny fanadihadiana sy ny famotorana atao, alefan’ny Bianco eny anivon’ny fitsarana ny raharaha avy eo. Anisan’ny fotokevi-dehibe mibaiko ity rafitra miady amin’ny kolikoly ity ny fampitoviana ny rehetra eo anatrahen’ny lalàna.
« Raharaha Bekasy » sy « Razaimamonjy Claudine… »
Tsiahivina fa anisan’ny raharaha efa nandalo teo anivon’ny Bianco tamin’ny taon-dasa ny vola voahodinkodina tao amin’ny Banky foiben’i Manakara, ny andramena naha voarohirohy an’i Bekasy. Eo koa ny fanodinkodinam-bola 30 tapitrisa Ar tao amin’ny Jirama. Manampy ireo ny « Raharaha volamena » tao Betsiaka ka nahaverezana volam-panjakana hatrany amin’ny roa miliara Ar mahery (2 165 067 887 Ar). Ny kolikoly tetsy amin’ny Cim Ambohidahy sy ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine », tamin’ny fanodinkodinam-bolan’ny kaominina.
Hatreto, maherin’ny 10 000 ireo antontan-taratasy vita fanadihadiana ary 3 000 ireo nosamborina tamin’izany.
Araka izany, andrasana ny ho tohin’ny raharaha.